Ogaden News Agency (ONA) – Madaxa Arimaha Siyaasadda xisbiga gumaysi kalkaalka oo fara cidi leh ku baxsaday
Madaxa Arimaha Siyaasadda xisbiga gumaysi kalkaalka oo fara cidi leh ku baxsaday
Posted by ONA Admin	/ June 24, 2011
Jigjiga – War dagdag ah oo hadda naga soo gaadhay xubna ku dhex jira maamulka Cabdi iley ayaa naloogu sheegay inuu si mucjisa ah kaga baxsaday daba-dhilfka shirqoolada la maleega Cabdi iley eek u magacaaban ariaha siyaasadda xisbiga Cabdiraxmaan Laba-Go’le.
Wararkan ayaa sheegaya inuu si halhaleel ah kaga baxay Dhagaxbuur iyadoo gaadhigii lagu waday uu sii jiidhay dad iyo ood ka agdhaweyd ka dib markii qof aan la ogayn uu dhagta u saaray in la qabanayo hadaanu daqiiqad gudaheed kaga cararin goobta uu taagan yahay.
Wuxuu noo sheegay xubinkan warka noo soo gudbiyay inuu jiray qorshe habaysan oo loo dhigay in lagu qabto isagoo nool, hasa ahaatee uu si mucjisa ah uga baxsady, ka dibna uu ku soo noqday Jigjiga.
Maamulka ka agdhow Cabdi iley ayaa hadda dareensan inuu kordhay nacaybkii loo qabay ka dib markii dambiyada ay ka galeen shacabka uu dhaafay xad uu shacabka uu sii dulqaadan karo, taasoo keentay inay ka aamin baxaan qofkasta oon ahayn qaarka uu aaminay ee dambiga shacabka uu galiyay.
Warar kaloo aan ka helnay ilo-wareedyo ku sugan Addisababa ayaa intaa raacinaya inay jiraan dareen uu qabo sirdoonka Wayaanaha oo ka xogwaramaya inay jiraan canaasir ku dhex jira maamulka iyo ciidanka Wayanaaha oo la socda xisbiyada mucaaradka ah oo iska kaashanaya sidii loo layn lahaa dadka uu ku shaqaysanayo Wayaanaha ee dhibaatada ku haya shucuubta ka soo horjeeda maamulka dhiigyacabka ah ee KT Zinawi.